Otu esi ejikwa PC gị | Akụkọ akụrụngwa
Tupu ígwé ojii ojii wee bụrụ nke ewu ewu, naanị otu ụzọ iji ga n'ihu na-arụ ọrụ site na ebe ọzọ bụ ịmekọrịta data niile dị na kọmpụta anyị na pendrive, opekata mpe ihe anyị maara na anyị nwere ike ịchọrọ, usoro iji jupụta usoro nchekwa igwe ojii.
Agbanyeghị, ọ bụghị ihe ngwọta maka ihe niile, ọkachasị mgbe anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị, anyị na-eji mmemme njikwa nke anyị, mmemme nke na-anaghị enye ohere nke ijikọ ụzọ ma ọ bụ nke ukwuu iji kwụọ ụgwọ maka iji ya arụ ọrụ. Maka ikpe ndị a, ihe ngwọta bụ ijikọ remotely.
Naanị naanị na anyị hụrụ na enwere ike ijikọ na nke ọ bụla bụ na anyị chọrọ akụrụngwa ka ọ dịrị na oge niile, ma ọ bụ zuo ike, ka e wee nwee ike ịtọ njikọ ahụ mgbe anyị zipụrụ arịrịọ njikọ ahụ. Enwere ike idozi nke a site na mmemme nke ihe na ngwa ngwa nke ngwa anyị, nke mere na ọ dị na mgbe anyị maara na anyị maara otu esi eji ya.
Mgbe ị na-ejikọ na ntanetị, n'ọnọdụ niile anyị chọrọ ngwa abụọ, otu nke na-eme dị ka onye ahịa, nke anyị na-etinye na kọmpụta site na ebe anyị ga-ejikọta na nke ọzọ na-eje ozi dị ka ihe nkesa, nke anyị na-etinye na kọmputa na anyị chọrọ jikwaa remotely.
Ọ bụghị ngwa niile anyị gosiri gị n’okpuru ka arụpụtara iji rụọ ọrụ nke ọma na kọmputa ọzọ na - enyere anyị aka ịrụ ọrụ a. Ozugbo anyị doro anya na ngwa ndị a niile na-arụ ọrụ zuru oke, nzọụkwụ ọzọ bụ ịjụ onwe anyị ma ha ruru ego ha na-efu (ọ bụghị ha niile nwere onwe ha).
1 Mmemme desktọọpụ dị na PC na Mac
1.2 Desktọọpụ nke dịpụrụ adịpụ nke Chrome
1.3 Windows desktọọpụ
1.4 Ọ bụla oche
1.5 Remote na Desktọpụ Manager
1.6 Iperus Remote na Desktọpụ
Mmemme desktọọpụ dị na PC na Mac
Aha TeamViewer jikọtara njikọ dịpụrụ adịpụ nke kọmputa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na kọmputa bidoro ịbata n'ụlọ. Ọrụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mara amara na nke anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, ebe ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ijikwa otu ahụ, mana na-enyekwa anyị ohere ịnyefe faịlụ n'etiti otu, mkparịta ụka iji kparịta ụka na ndị ọzọ .. .
Ojiji nke ngwa a bụ n'efu maka ndị ọrụ nzuzo, mana ọ bụghị maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ndị nwere atụmatụ dị iche iche dị dabere na ọnụọgụ kọmputa anyị chọrọ ijikọ. TeamViewer, dị ma maka Windows maka macOS, Linux, ChromeOS, Raspberry Pi, iOS na gam akporo.
Njikwa Remote TeamViewer
Njikwa Remote TeamViewerfree
Ihe ngwọta nke Google na-enye anyị bụ nke kachasị dị mfe, ma na-enye anyị ohere ijikwa kọmputa dị anya, site na kọmpụta ọzọ (PC / Mac ma ọ bụ Linux) ma ọ bụ site na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla site na ngwa kwekọrọ. Google Chrome na Desktọpụ Ọ bụ ihe ọ bụla karịa ndọtị na anyị nwere iji wụnye kpọmkwem site na Chromelọ Ahịa Web Chrome na Google Chrome.
Ozugbo anyị wụnye ya, anyị ga-eme ndọtị na kọmputa nke anyị chọrọ ijikọ ha ma detuo ya koodu egosiri site na ngwa ahụ. Na kọmputa nke anyị ga-ejikọ, anyị ga-abanye koodu ahụ iji kwado njikọ ahụ. Ozugbo anyị guzobere njikọ ahụ, anyị nwere ike ịchekwa ya na kọmpụta anyị iji nwee ike ijikọ n'ọdịnihu.
Chrome Remote na Desktọpụ bụ kpam kpam free ọ chọrọ njikọ dị mma iji rụọ ọrụ (na njikọ ADSL ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, ka anyị kwuo).
Desktọpụ Latịn Chromefree
Ihe ngwọta Microsoft nyere anyị adịghị na nsụgharị Windows niile, naanị na nsụgharị Pro na Enterprise iji jikọọ remotely. Site na kọmputa ndị ahịa anyị nwere ike ijikọ na enweghị nsogbu ọ bụla na ụdị Windows 10 Home. Ozugbo anyi mechara oru a, ka anyi jiri ya, anyi aghaghi ime ya ibudatara na Windows app store, macOS, iOS na gam akporo ngwa kwekọrọ.
Nwere ike iji Microsoft Remote Desktop ahịa ka jikọọ na PC dịpụrụ adịpụ na ihe omume gị site na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na-eji ihe ọ bụla na ngwaọrụ. Nwere ike ijikọ na PC gị na-arụ ọrụ ma nwee ike ịnweta ngwa gị niile, faịlụ na ihe ntanetị dị ka a ga - asị na ị nọ ọdụ na tebụl gị. Can nwere ike ịhapụ ngwa mepere emepe na-arụ ọrụ wee lelee otu ngwa ahụ n'ụlọ, niile site na onye ahịa RD.
Teewe Desktọpụ Microsoftfree
8 na Desktọpụ
Ọ bụla oche
Ngwa ọzọ anaghị achọ ego ọ bụla iji jikọọ na kọmputa ọzọ, anyị na - ahụ ya na Desk ọ bụla, ngwa ahụ dịkwa maka maka Windows maka MacOS, Linux, BSD n'efu, iOS na gam akporo. Klọ ọrụ ọ bụla na-enye anyị ohere ịkọrọ ndị ọrụ ibe anyị ndị anyị na ha na-arụ ọrụ n'otu akwụkwọ ahụ, nyefee faịlụ n'etiti kọmputa dị iche iche, na-enye anyị ohere ịhazi njirimara onye ọrụ, dekọọ njikọ ndị emere ... nhọrọ ndị ikpeazụ a dị na ụdị ahụ dị maka ụlọ ọrụ, ụdị nke anaghị akwụ ụgwọ, dị ka ọ dị na nke TeamViewer nyere.
AnyDesk, ngwanrọ desktọọpụ dịpụrụ adịpụ
AnyDesk desktọọpụ dịpụrụ adịpụfree
Remote na Desktọpụ Manager
Onye na-ahụ maka desktọọpụ na-arụ ọrụ (RDM) na-ejikọta njikọ niile dịpụrụ adịpụ na otu ikpo okwu nke ejiri n'etiti ndị ọrụ na ndị otu niile echedoro ya. Site na nkwado maka ọtụtụ narị teknụzụ e wuru - gụnyere ọtụtụ ogbugba ndu na VPNs - yana usoro njikwa njikwa paswọọdụ etinyere, njikwa njikwa ọkwa zuru ụwa ọnụ, yana ngwa mkpanaka siri ike iji kwado ndị ahịa desktọọpụ maka Windows na Mac, RDM bụ mma agha Switzerland maka ịnweta ụzọ.
Remote na Desktọpụ Manager Ọ dị n'efu maka ndị na-abụghị ndị ọkachamara yana maka ebe agụmakwụkwọ. Ọ dakọtara na Windows, macOS, iOS na gam akporo.
Oghere arụ ọrụ
Oghere arụ ọrụfree
Iperus Remote na Desktọpụ
Iperius Remote bụ mmemme dị mfe na vasatail nke na-enye anyị ohere ijikọ remotely na kọmputa Windows ma ọ bụ sava ọ bụla. Ntinye ahụ adịghị mgbagwoju anya ma nye anyị ohere ịrụ faịlụ na-enyefe, otutu oge, nnweta uzo di omimi, ihe ngosi na ikesa ihuenyo.
Naanị ihe anyị nwere ike ịchọta gbasara ọrụ a bụ n’oge ahụ naanị dakọtara na Windows kọmputa, ma ọ bụrụ na ị nwere a Mac na-arụ ọrụ, ị ga-ahọrọ otu n'ime ndị dị iche iche ihe ngwọta na anyị gosiri n'elu. Dị ka ngwaọrụ, mobiles, anyị nwekwara ike iji anyị iPhone ma ọ bụ gam akporo jikọọ remotely.
Iperius dịpụrụ adịpụ
Developer: Tinye Software
Iperius dịpụrụ adịpụfree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Otu esi ejikwa PC gị
EMUI 10.1 Beta Global: Terminals na-emelite yana otu esi eme ya